Nolosha nool: Sanduuqa Catalyst
Sanduuqa Catalyst wuxuu hoos u dhigayaa deynta kharash yar oo jaban si loo hagaajiyo nolosha dadka danyarta ah iyo beelaha ay ku nool yihiin.
$ 3 milyan oo amaah 10 sano ah 2%; laga soo bilaabo 2011
Sanduuqa Catalyst waxay bixisaa amaahda jaban ee ururada horumarinta bulshada. Deynta ay ku leedahay Minneapolis-St. Meelaha Booska Boosku waxay xoojiyaan bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo iyada oo si deg deg ah isu beddeleysa waddooyinka gaadiidka dadweynaha.
Deynta ayaa si buuxda loo geeyaa iyo raadinta guusha.
Ilaa hadda, maalgashadeenu waxay noqdeen amaahda qalabka, hantida maguuraanka ah, iyo raasumaalka shaqada ee ganacsiyada yaryar iyo guryaha la awoodi karo. Taageerada inta lagu jiro dhismaha Khadka Cagaaran ee Saint Paul wuxuu muhiim u yahay ilaalinta ganacsiyada yaryar iyo bulshooyinka dhaqameed, sida Degmada Meongong. Tusaale ahaan, Lacagta Catalyst waxaa lagu amaahiyay 31 shirkadood oo yaryar oo ay ku jiraan muusikada maxaliga ah ee muusikada Club Turf iyo in la abuuro guryo sida 73 qaybood oo la awoodi karo Jamestown Homes.
Shaqada Hay'adda Catalyst ee hay'adaha horumarinta beesha ayaa xoojiyay hay'adaha maxalliga ah ka hor inta aan lacagku u shaqaynayn dhulka. Tusaale ahaan, sannadka 2016 Xarunta Horumarinta Deriska waxay isticmaashaa $ 2.2 milyan oo deymiska Catalyst si ay u keento maalgashado kale ayna kordhiso qiyaasta celceliska amaahda ee $ 14,000 ilaa $ 44,000.
Sawirka Sawirka: Kaalmo-dhaqaale Waddan ee Xarunta Dhexe ee Waddada Wadaagga